Global News Nepal मेस्सी पीएसजीको प्रशिक्षणमा सहभागि (तस्वीरमा हेर्नुहोस्) - Global News Nepal
काठमाडौं : अर्जेन्टिनाका विश्वप्रख्यात स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)को प्रशिक्षमा सामेल भएका छन् । स्टार खेलाडी मेस्सी टिमको प्रशिक्षणमा सामेल भएका हुन् ।
मेस्सीको यो पीएसजीमा पहिलो प्रशिक्षण हो । मेस्सी पीएसजीमा फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध भएका हुन् । स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाको सिनियर टिमबाट १७ वर्ष खेलेका मेस्सी अब फ्रेन्च क्लबमा देखिने भएका छन् ।
हाल मेस्सीले पीएसजीसँग दुई वर्षको सम्झौता गरेका छन् । ३४ वर्षीय मेस्सी आगामी सन् २०२३ सम्म पीएसजीमा रहनेछन् । मेस्सीले पीएसजीमा ३० नम्बरको जर्सी लगाउने भएका छन् ।
बार्सिलोनाका कीर्तिमानी खेलाडी मेस्सीले ७७८ खेलमा ६७२ गोल गरेका थिए । मेस्सीले २००४ मा बार्सिलोनाको सिनियर टिममा डेब्यु गरेका थिए । मेस्सी बार्सिलोनाका लागि सर्वाधिक गोल र सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडी मानिन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहास्ः इङ्ल्यान्ड र भारतबीच जारी दोस्रो टेस्टको पहिलो दिनमा भारतीय ओपनर क.एल. राहुलले ‘द लर्ड्स’मा शतक प्रहार गरेका छन्।
द होम अफ क्रिकेट नामने बहुचर्चित लर्ड्स क्रिकेट ग्राउण्डको महत्व क्रिकेट जगतमा छुट्टै रहेको छ। क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो ब्रान्ड ‘मारीलेबन क्रिकेट क्लब’को स्वामित्वमा रहेको लर्ड्स मैदानमा क्रिकेट खेल्न पाउनु कुनै पनि क्रिकेटरको लागि सानो कुरा भने होइन, यो सौभाग्यको कुरा हो।
ड्रेसिङ रूमदेखि मैदान सम्मको त्यो लामो हिँडाइ कुनै पनि क्रिकेटको लागि अविस्मरणीय अनुभव हुने बताइएको छ। त्यस्तै यहाँ शतक प्रहार गर्नुको महत्व त झन् निकै ठुलो रहेको छ। यहाँ शतक प्रहार गर्ने खेलाडीको नाम द लर्ड्स अनर्स बोर्डमा सधैंको लागि लेखिन्छ। त्यस्तै एक इनिङमा ५ विकेट तथा एक खेलमा १० विकेट लिने खेलाडीको नाम पनि यहाँ सदैव रहिरहने छ ।
यस प्रकारको कीर्तिमान रच्ने पछिल्लो खेलाडी बनेका छन् भारतीय ओपनर के.एल. राहुल। राहुलले बिहीवार इङ्ल्यान्डविरुद्ध पहिलो इनिङमा १२७ रनको अविजित पारी खेलका छन्। यसअघि सन् २०१४ मा भारतीय टेस्ट टोलीका उप(कप्तान अजिन्क्या रहानेले यो उपलब्धि समेत प्राप्त गरेका थिए। रहानेले त्यसबेला इङ्ल्यान्डविरुद्ध १०३ रनको पारी खेलेका थिए।